Wararka - Kooxda Xinzi Rain Group waxay fulisaa adeegyada habaynta dharka hoosta ee caalamiga ah
Xinzi Rain Group, Bishan gudaheeda, shirkaddu waxay samaysay mareeg caalami ah si ay u fuliso adeegyada habaynta nigiska caalamiga ah.
Shirkadeena waxay siisaa hal mar “Xirashada Dharka” dumarka adduunka oo dhan, taasoo dumarka ka dhigaysa kuwo aad u qurux badan, oo aan marna xidhmin, oo hela isku kalsooni iyo awood dheeraad ah. Badeecadaha ayaa ku lug lahaa Cidhibtiinii Sare, Kabaha, Isboortiga, Dharka hoostiisa, Lingerie, aan xuduud lahayn iyo naasaha bilaa lacag la’aanta ah, Plus Size Bra & Kooban, iyo qaar ka mid ah oo wata astaanta ay iska leeyihiin.
Shirkadda Xinzi Rain waxay ujeeddadeedu tahay inay siiso hal mar “Xirashada Dharka” dumarka adduunka oo dhan, taasoo ka dhigaysa haweenka inay noqdaan kuwo aad u qurux badan, oo aan mar dambe xirnayn, oo ay helaan isku kalsooni iyo awood dheeraad ah.
Xinzi Rain ayaa la guddoonsiiyay maamuusyada shirkad tayo sare leh, ganacsi ilbax ah, shirkad ilaalinaysa deegaanka iyo tobanka nooc ee ugu sarreeya warshadaha nigiska ee Shiinaha. Raadinta mustaqbalka, Xinzi Rain waxay la jaanqaadi doontaa waqtiyada, sahamin doontaa oo abuuri doontaa, waxayna si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaqi doontaa jihada horumarka ee warshadeynta, kala -duwanaanshaha, farsamada, is -habeynta iyo ururinta.
Isbeddellada cusub ee caalamiyeynta, shirkadda Xinzi Rain waxay biloowday adeegga habaynta nigiska caalamiga ah, si ay ula socoto baahiyaha kala duwan ee dadka ku nool dalal iyo gobollo kala duwan, si ay u siiyaan adeeg habayn shakhsiyeed, oo ku saabsan maaddada, qaabka, cabbirka, midabka, LOGO iyo baakadaha habaynta sifeynta, si loo bixiyo adeeg habayn degdeg ah, wax ku ool ah, xirfad leh oo lagu kalsoonaan karo.
Si aad ugala tashato dhar -xidhashada naasaha dumarka ee caadooyinka iyo Adeegga Ringerie: OEM/ODM, adeegga naqshadeynta, sambal samaynta, MOQ, wax -soo -saarka badan, waqtiga dhalmada, waqtiga dhoofinta, dammaanadda bixintaada, warshaddeena, dadkeenna, alaabtayada iwm, pls dareemo xor u ah inaad noo soo dirto E-mail, ka tag farriintaada, ku dar lambarka WhatsApp, ama na soo wac, aad baad u soo dhaweynaysaa!